Mianàra mankasitraka – Blaogin'i Voniary
Efa ho enim-bolana maninjitra isika no tao anatin’ny hamehana ara-pahasalamana niatrehana ny valanaretina Covid-19. Amin’ny besinimaro dia midika aretina, fahafatesana, fihibohana, fahaverezana asa, tsy fisiana, fisarahana iny vanimpotoana iny. Ary marina izany, tena izay mihitsy! Izaho manokana dia nahatsapa hoe toa niato izany ny fiainana, betsaka ny fahazarana tsy maintsy najanona ary nisy ireo vinavina tsy maintsy nofoanana. Saingy raha mijanona eo amin’ireo trangan-javatra ireo ianao dia ho tototry ny fahakiviana sy ny fahadisoam-panatenana.
Ny toe-tsaina mpandresy anefa dia manampy anao hahay hitrandraka ny trangan-javatra rehetra eo amin’ny fiainanao, indrindra ny sedra, mba hitondra soa ho anao hatrany izany.
“Ny zava-drehetra tsy voatery hahafaly anao, fa ny zava-drehetra miara-miasa hahasoa anao”
Fomba iray entinao mitaiza io fijery miabo io ity horesahiko aminao anio ity: ny fahaizana mankasitraka. Ahoana ary no atao hiatrehana ny fotoan-tsarotra eo amin’ny fiainanao ary hahatsapanao fankasitrahana na inona na inona mitranga?
Miezaha mamoaka ny alahelo izay ao anatinao
Hanombohako azy aloha, ity misy torohevitra iray raha mahatsiaro mavesatry ny sedram-piainana sy ny fijaliana ianao. Ezaho ny mamoaka izany amin’ny fomba milamina mba tsy hitondra aretina ho anao na hanimba ny manodidina anao izany.
Alahelo tsy ambara havana, zakan’ny tompony ihany.
Mety manana namana akaikin’ny fonao ianao, rahalahy, rahavavy, reny, ray azonao izarana izany. Tsy voatery ho olombelona anefa no izaranao izany satria samy manana ny olany koa ny tsirairay. Mety misy ny vonon-kihaino anao, mety misy ny manana olana goavana noho ny anao ka ny azy aza tsy zakany. Misy namana anankiray izay anefa vonona hihaino anao foana dia ilay Andriamanitra Mpahary. Mety samy manana ny fiantso azy ny olona araka ny finoany. Azonao tantaraina aminy amin’ny resaka tsotra na vavaka ny zavatra lalovanao. Ankoatra izany, misy fomba azo atao koa ohatra hoe miresaka amin’ny tenanao manokana ianao na manoratra.
Izaho manokana dia tia manoratra. Nisy fotoana aho toa very hevitra lava sy kivy dia tsy nahavita nanoratra mihitsy. Fa rehefa nandeha teny ny fotoana dia vonona ny hanoratra ihany aho. Nanomboka nanakorisa ny penina tao anatin’ilay diariko ary aho. Nimenomenona, nanala hatezerana aloha no nataoko tamin’ny tapany voalohany avy eo tapitra iny dia nikorisa ho azy ny penina nitanisa ireo zavatra tsara niainako, ireo noraisiko ho fahombiazana nefa mety tsy nisy dikany tamin’ny hafa, ireo hafaliana nifampizarako tamin’ny fianakaviako, ny namako, ny havako ary ny mpiara-miasa amiko. Tsaroako daholo ireo ka tsiky hatrany no nameno ny tavako teo am-panoratana. Saika tsy nety vita ilay fitanisana fa misy nipoitra hatrany tao an-tsaiko ary tsapako ny hafaliana sy ny hasambarana nipololotra avy any anatiko. Izany indrindra no idirantsika amin’ny torohevitra manaraka: mahaiza mankasitraka.
Inona moa no atao hoe fankasitrahana?
Ny fankasitrahana na fisaorana dia fanehoana fahafaham-po, fifaliana, fankatoavana na fankamamiana noho ny zava-bitan’ny olona iray taminao. Fa eto kosa isika dia tsy mianona amin’ny fankasitrahana olombelona fotsiny isika fa fankasitrahana ny fiainana, ny zava-boahary ary indrindra fankasitraraha ilay Mpahary.
“Misaora an’Andriamanitra amin’ny zava-drehetra fa izany no sitrapony ao amin’i Kristy Jesoa”
1 Tesalonianina 15 : 18
Inona ary no hitondrako fankasitrahana?
Hoy angamba ianao hoe: “tsy hitako mihitsy izay azoko ankasitrahana tamin’iny valanaretina sy fihibohana iny. Izao ve dia mbola hisaorako an’Andriamanitra ihany, izao fiainana efa ratsy sy mitotongana izao?”.Marina tokoa izany fa mampiondrika amin’ny tany mihitsy ny zava-miseho indraindray. Toetra ratsy mandeha ho azy sy raiki-tapisaka amin’ny olombelona ihany anefa io tsy fahitana afa-tsy ny zavatra ratsy io. Ny toe-tsaina mpandresy sy ny fijery miabo no ahafahana manova izany toe-tsaina ratsy izany ka manampy anao hikaroka sy hahita izay zava-tsoa hatrany amin’izay mitranga.
Eto indrindra koa no ilaina ny mahafantatra ny tena fahombiazana ho anao. Mety ho vola sy harena, mety ho fananana vady sy zanaka, mety ho fahavitana fianarana, mety ho fahazoana asa, mety ho fahatontosana tetikasa…Na efa ela, na vao haingana dia tsarovy fa efa maro ireo zavatra tsara nolalovanao, efa maro ireo fandresena azonao. Na amin’izao fotoana izao aza, mino aho fa misy fiovana tsara nentin’iny valanaretina Covid-19 iny teo amin’ny fiainanao. Ohatra fotsiny hoe noho ny fihibohana dia nanam-potoana namakiana boky na nanarahana fiofanana an-jotra (formation en ligne) ianao.
Ireny rehetra ireny dia hahatsapanao fa efa nanao zavatra tsara teo amin’ny fiainanao ilay Mpahary anao. Ireny koa dia manome fanantenana anao fa mbola hanao Izy.
Zaraiko aminao ohatra ny ahy ny santionany amin’ireo tao anaty lisitry ny fankasitrahako:
Ny nidiran’ny zanako lahimatoakely nianatra tamin’ny taona 2019. Nanatitra azy aho, sady faly no nalahelo kely fa nirehareha koa satria manan-janaka niditra nianatra. Nahafinaritra ahy indrindra koa ny nanatrika ny fivorian’ny ray aman-drenin’ny mpianatra voalohany.
Ny namoahako ny boky nosoratako voalohany indrindra teo amin’ny fiainako : “Raiso an-tànana ny fiainanao” ary tao anatin’ny fihibohana indrindra izany.
Santionany fotsiny ireo mba hanomezana sopapa anao.
Ahoana ny fomba fankasitrahana?
Manasa anao ary aho haka fotoana, hitombona ao anaty fahanginana. Avelao hipololotra avy any anatinao indrindra ireo zavatra izay nahatsapanao fifaliana, fiadanana anaty, filaminan-tsaina, fahasambarana, fahafinaretana ary fahombiazana. Soraty na tanisao am-bava tsirairay ireny. Ezaho tadidiana ny pitsopitsony rehetra tamin’ireny zava-niseho ireny toy ny tsikin’ny vadinao, ny tokelaky ny zanakao, ny hafalian’ny manodidina anao, ny fisaorana anao, ny firariantsoa azonao. Alaivo sary an-tsaina, henoy ny tsio-drivotra, ny rano misasasasa, ny masoandro mibaliaka sy ny maro hafa. Tadidio ny fihetseham-ponao sy ireo zavatra tsapanao tamin’izany: ny hita, ny tsiro, ny fofona, ny feo sy ny kasika. Ho hitanao fa ho feno hafaliana tsy hay tohaina ianao. Ary tsy hijanona eo ihany izany fa hitohy mandritra ny ora maromaro na ny tontolo andro mihitsy aza.
Tohizo hatrany: Diarin’ny fankasitrahana
Matetika ao anatin’ireny sedra ireny no misy lesona sy zava-baovao entinao hiaina. Izaho manokana izao efa ela ihany no mivoy ny fijery miabo fa indraindray very fanantenana ihany. Tao anatin’iny fihibohana iny indrindra no nahatsapako fa mila kolokoloina ny toe-tsaina pandresy. Alaivo sary an-tsaina hoe toy ny voninkazo ny toe-tsaina mpandresy sy ny fijery miabo ao anatinao ka mila karakaraina: asiana zezika, esorina ny ahidratsy na tsilo mitady hamono azy ary tondrahana. Ity misy fitaovana iray hanampy anao hanana fahazarana hijery izay soa hatrany isan’andro: ny diarin’ny fankasitrahana (journal de gratitude).
Ny fomba fanaovana diarin’ny fankasitrahana
Raha zatra mivavaka isaky ny alohan’ny hatory ianao dia mety efa mandeha ho azy aminao ny fisaorana an’Andriamanitra noho ny tontolo andro natrehinao. Toy izany indrindra ity diarin’ny fankasitrahana ity.
Misafidiana karine na diary iray (Ohatra ny Diary sy Rakibolana novokarin’ny Blaogin’i Voniary) ary asio penina miaraka aminy. Ny tena mety dia karine kelikely azonao entina any anaty kitapo na poketra ka hanaraka anao amin’izay rehetra halehanao.
Isan’andro, soraty ny daty ary manoràta zavatra iray farafahakeliny: ny tranga tsara niainanao, ny zava-baovao azonao, ny fahombiazana azonao, ny hafaliana tsapanao tamin’ny fizarana zava-tsoa sy fanampiana ny hafa, ny hafinaretana tsapanao sy ny rehetra mitovy amin’izany. Raha fintinina dia ireo zavatra mampisaotra an’ilay Mpahary miainga amin’izay goavana indrindra ka hatramin’ny bitika indrindra no soratanao ao. Tsy voatery amin’ny alina ihany ianao no hanoratra ao fa amin’ny fotoana rehetra izay hahatsapanao faniriana hankasitraka.
Rehefa kolokoloinao io fahazarana mankasitraka io dia ho gaga ianao fa hanjary ho mora aminao ny hahita tara-pahazavana hatrany na dia manjombona aza ny andro. Mitondra hery ho anao ihany koa ny famadibadihana ny pejy tany aloha hahitanao ireo zavatra tsara rehetra nandalo teo amin’ny fiainanao.
Mino aho fa naharesy lahatra anao hianatra hankasitraka sy hanomboka diarin’ny fankasitrahana ity lahatsoratra ity. Mandrapihaona indray ô!
développement personnel gasy, fijery miabo, gratitude journal, journal de gratitude gasy, mahaiza mankasitraka, mianàra mankasitraka, toe-tsaina mpandresy
2 commentaires sur “Mianàra mankasitraka”
Misaotra anao indrindra Voniary nizara izany. Feno fifaliana ny fo ary manana fanantenana ny fanahy eo am-pamakiana ity lahatsoratra ity. Azo lazaina fa hery vaovao entina miatrika ny tontolo andro no nozarainao anio. efa mampiasa ity diarin’ny fankasitrahana ity ihany fa nohon’ny rotoroto tontolo andro dia zary adino ny mankasitraka ny tena fa ny iala sasatra sy anomana ny tontolo andro vaovao no mimbahana ao an-tsaina. Paik’ady vaovao no natolotrao anolokolona ilay voninkazo fifaliana sy fiadanana ato anaty. Mankasitraka indrindra amin’ilay lahatsoratra tenindrazantsika fa tena mampianatra sy mitaiza ary mampitombo ny fitiavana azy (androhany no nampatsiahy ahy fa MIHITSY kay tsy misy « N ».
Mirary soa sy tsara ary mendrika ao anaty fahasalamana mandrakariva anao
Mankasitraka anao indrindra! Mampazoto mizara hatrany ny fahafantarako fa misy mamaky izay atolotro eto 🙂 Dia mazotoa ary mameno ilay diarin’ny fankasitrahana e! Mirary fiainana feno fankasitrahana ho anao ihany koa.